Sazian’ny Governemanta Makedoniana Ny Fakàna Sary Fihetsiketsehana Amin’ny Drôna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Febroary 2015 16:55 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, English, русский, македонски, Swahili, čeština , Español, English
Nanampy tamin'ny fampisehoana ny haben'ny hetsika goavan'ny mpianatra vao haingana ny sary sy lahatsary nalaina tamin'ny drôna, izay zara raha nivoaka tamin'ny fampahalalam-baovao, saingy efa antsoina hoe hetsiky ny mpianatra goavana indrindra tao Makedonia tao anatin'ny 25 taonan'ny fahaleovantena. Tamin'ny 10 Desambra 2014, mpianatra sy mpampianatry ny oniversite an'arivony no nidina an-dalambe mba hitsipaka ny drafitrasan'ny governemanta hanaramaso ireo fanadinana ahazoana diplaoma.
Nilaza ny mpianatry ny Plenum, mpikarakara ny fihetsiketsehana tamin'ny 10 Desambra fa notanan'ny polisy ny mpikirakira fakantsary drôna iray. Tsy misy ny taratasim-panjakana milaza hoe mandra-pahoaviana ary inona ny fiampangana.
Roa taona lasa izay, Makedoniana an'aliny no nidina an-dalambe mba hanohitra ny fahantrana sy ny kolikoly misy ao amin'ny firenena manana mponina roa tapitrisa. Nanomboka teo, vondron'olona isan-karazany – mpianatra, mpampianatra, mponina sy mpiasa – no nivoaka mba hanao fihetsiketsehana mitaky ny zon'izy ireo sy fiainana tsaratsara kokoa. Nampiasa tetikady isan-karazany ny governemanta mba hanakanana ny fitantarana ny fihetsiketsehana amin'ny fampahalalam-baovao, anisan'izany ny fandrahonana mpanoratra gazety.